Dacwad oogaha Sacuudiga: dilka Khaashuqji waxaa amray sarkaal | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Dacwad oogaha Sacuudiga: dilka Khaashuqji waxaa amray sarkaal
Hilbihii ayaa looga dhiibay qof “shaqaale” maxalli ah, meel dibadda ah. Sawir gacmeedka qofka shaqaalaha ah ayaa la sameeyey, waxaana socda baadigoob lagu hayo halka hilbihiisa laga heli karo.
“Amiirka dhaxal sugaha ah waxba kalama socon” ayuu ku sii daray.
Amir Maxamed, wiilka boqor Salmaanka Sacuudiga, ahna ninka la aaminsan yahay inuu Sacuudiga xukumo, ayaa beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa “dambi naxariis darro ah oo aan sinnaba qiil loogu samayn karin”.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mevlut Cavusoglu, ayaa sheegay Khamiistii in qaar ka mid ah hadallada ku xigeenka dacwad oogaha Sacuudiga aysan “waafi ahayn”.
“Waxay yiraahdeen qofkan waa la dilay sababtoo ah iska caabbin ayuu sameeyey, ayadoo dilkan uu ahaa mid sii qorshaysnaa” ayuu ku yiri warfidiyeenka.
“Mar kale waxay yiraahdeen waa la jarjaray ….laakin ma aha wax iska dhacay. Qalabkii loo baahnaa iyo dadkiiba hore ayaa loo keenay si ay u dilaan oo ay u jarjaraan”.
“Kuwii amarka bixiyey iyo kuwii fuliyey waa in sidoo kale la caddeeyaa, qaabka ay wax u dheceenna waa in aan la qarin” ayuu yiri Mr Cavusoglu oo intaa ku daray in Turkigu uu “iftiimin doono dhamaanba dhinacyada uu dilkan leeyahay”.
Previous articleMaraykanka oo Xayiraad dul dhigay 17 oo loo haysto dilkii Jamaal Khashoggi
Next articleSafiirka Maraykanka ee Soomaaliya oo warqadaha Aqoonsiga laga guddoomay (Sawiro)